नेपाललाई गुलाम बन्न र हुन बाट बचाउने र जोगाउने राजसंस्था हो । मुलुकको हितमा राजसंस्था थियोे । - Enepalese.com
नेपाललाई गुलाम बन्न र हुन बाट बचाउने र जोगाउने राजसंस्था हो । मुलुकको हितमा राजसंस्था थियोे ।
इनेप्लिज २०७९ असार ९ गते १०:२६ मा प्रकाशित
नेपाललाई गुलाम बन्न र हुन बाट बचाउने र जोगाउने राजसंस्था हो । मुलुकको हितमा राजसंस्था थियोे । तर नब्बे प्रतिशत नेपालीहरुले राजसंस्थाको महत्त्वलाई बुझेको खोई ? अब मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको तत्काल आवश्यक छ ।
नेपालीहरुलाई गुलाम हुनबाट बचाउन र जोगाउन राजसंस्था अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु संग सदैव बाधकको रूपमा खडा भयो । नब्बे प्रतिशत नेपालीहरुको दुईतिहाइ बहुमतले राजसंस्थाको महत्त्वलाई बुझेनन र राजसंस्थाको अस्तित्वलाई नब्बे प्रतिशत नेपालीहरुको दुइतिहाई बहुमतले सदाका लागि समाप्त पारे ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले हाम्रो मुलुक नेपाललाई गुलाम नबनाएकोले नेपालीहरु मात्तिएका छन । नेपालीहरुलाई चेतना, पीडा र दु:खको अनुभव र महसुस भएको छैन । अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आवश्यक छ ।
राजा ज्ञानेन्द्र शाह उद्धारवादी र देशभक्त हुन कसैले बुझे ? तर नब्बे प्रतिशत जनताहरुले राजसंस्थाको मुल्यांकन गर्न सकेनन र राजसंस्थाको महत्त्वलाई बुझ्न सकेनन ।
आज मुलुकमा आर्थिक संकट छ । महँगी बढेको छ । मनपरि तरिकाले खानेतेल, पेट्रोल, डिजल र ग्यासको भाउ दिन प्रतिदिन बढेको छ । तब पनि हामी नेपालीहरुलाई कुनै पीडा छैन रमाएका छन र खुशी छन । झोलेहरुले विरोध गर्थे किन ? नब्बे प्रतिशत झोलेहरु नेताहरूको दास र गुलाम बनेका छन । नब्बे प्रतिशत नेपाली नागरिकहरु ताक परे तिवारी नत्र गोतामे छन, दहीचिउरे, मासु भात, रक्सी, दारु, पैसामा बिकाउ, अवसरवादी र स्वार्थी छन । नब्बे प्रतिशत नेपालीहरुलाई दु:ख र पीडाको केही पनि अनुभव छैन । यसकारण रमाएका र खुशी छन । नेपाललाइ कुनै मुलुकले आजसम्म गुलाम बनाएन तसर्थ मुलुकमा विकास भएन ।भारतलाई अँग्रेजले गुलाम बनायो भारतवासीहरुले अँग्रेजहरु बाट धेरै कुराहरू सीखे र भारतवासीहरुले आफनो कमी कमजोरीहरु पत्ता लगाए र भारतवासीहरुले धेरै ज्ञान र अनुभव हरु हासिल गरे । अँग्रेजहरुले भारतलाई धेरै कुराहरू सिकाएर गएकोले आज भारतले विकासको दाँजोमा दिन प्रतिदिन फडको मारिरहेको छ । नेपाललाई आजसम्म कुनै पनि मुलुकले गुलाम नबनाएकोले नेपालीहरु मात्तिएका छन ।
नेपाल जबसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको गुलाम बन्दैन तबसम्म नेपालीहरुलाई चेतना, पीडा र दु:खको अनुभव हुँदैन यसकारण नेपालीहरु मात्तिएका छन । अब मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सेनाहरुको तत्काल आवश्यक रहेकोे देखियो ।
स्वतन्त्र नेपाली नागरिक:राकेश कुमार शर्मा । मोबाइल नम्बर ९८४८०५५७७६ ।